Isitulo ekuhombiseni ikhaya - Iinzuzo ezinkulu | Bezzia
USusana godoy | 30/11/2021 15:47 | Izixhobo zasekhaya
Zininzi iziqwenga zefanitshala, zombini ezisisiseko kunye nezongezelelweyo, ezinokuba semakhaya ethu ukuze sizinike ukugqiba esikufunayo. Isitulo kumhlobiso ngomnye wabo kwaye ngenxa yezizathu ezininzi. Ngaba uyazi ukuba banamathuba amaninzi okugqiba zonke iikona zamagumbi ethu? Umzekelo yi I-Maisons du Monde isitulo njengale isemfanekisweni.
Ngaloo nto kuphela, siyazi ukuba siza kufuna izitulo ebomini bethu. Amagumbi okuhlala, amagumbi okulala kunye neendawo zokungena ekhaya ziya kusibulela. Iqhekeza elikhethekileyo eliya kulungelelanisa into oyifunayo, yiyo loo nto kubalulekile ukuba ufumanise zonke ezi zibonelelo kunye neengcinga ezilungileyo ukuze ibe yinto enye endlwini yakho.
1 Faka isitulo kumhombiso woyilo lwakho
2 Izitulo ziyasebenza kwaye zonga indawo
3 Zisinika ukuguquguquka okukhulu
4 Khetha izitulo eziphezulu zekhitshi
Faka isitulo kumhombiso woyilo lwakho
Sithanda ifenitshala enokuthi iguqulelwe kuzo zonke iintlobo zeendlela zokuhombisa, kuba ukulungiswa ngaphakathi sibunjwe ngokweminqweno yethu. Kodwa kuyinyani ukuba njengoko wonke umntu enencasa yakhe kulo mhlobiso, nathi sifuna imibono eyahlukileyo ngokwefenitshala. Isitulo sibasondeza kuthi kuba kuyinyani ukuba akukho modeli inye yokusimangalisa, kodwa iya kuba mininzi kwaye yahluke kakhulu. Ngenxa yoko, kuyinzuzo ukufumana ezinye zeesayizi ezahlukeneyo, kunye nokugqitywa kweplanga ukwenzela ukuhlobisa okungaphezulu okanye i-velvet kunye nemilenze yentsimbi. kwisitayile sangoku ngakumbi. Ngendlela efanayo, unokudibanisa imibala kunye nemilo enkosi kuzo zonke iinketho oya kuzifumana kwiimarike. Ngaba asingombono omhle lowo?
Izitulo ziyasebenza kwaye zonga indawo
Ezinye iingenelo zokubheja kwi-stool ekuhombiseni ikhaya kuba zisebenza kakhulu. Kwelinye icala, kuba kunzima ukuthatha indawo, nto leyo ebenza babaluleke kumakhaya amancinci kwaye banconywe kwamakhulu. Ngelixa kwelinye icala, ungazibeka kuyo nayiphi na ikona, uyasebenza ukuba uhlale phantsi okanye, ubeke kuzo zonke izinto ozifunayo ngamaxesha onke. Iincwadi, iiglasi zakho okanye iiselfowuni zingakhathalelwa kakuhle kuzo. Kuya kuhlala kukho indawo kubo, kuba ezona ziphantsi, ungazigcina phantsi kwetafile, umzekelo.
Zisinika ukuguquguquka okukhulu
Kungakhathaliseki ukuba luhlobo luni lomhlobiso, ngoku sishiywe ngendlela enokuguquguquka ngayo. Ngoba? Ngokuba ungazisebenzisa njengendawo yokulala kumagumbi akho okulala. Kodwa kwakhona njengeqhekeza phantsi kwebhedi. Ingcamango yokudala ukuba ngexesha elifanayo unokudibanisa kunye nesitayela sayo. Nangona ngamanye amaxesha, i-original in breaking kunye nabo kunye nokubeka iqhekeza elincedisayo elinesitayile esahlukileyo, ukudala umphumo obalaseleyo.
Kwelinye icala, ungayisebenzisa njengesihlalo kwigumbi lokuhlala. Ekunene ecaleni kwesofa engundoqo ungabeka enye okanye ezimbini, ukuba uya kuzisebenzisa njengezihlalo ezongezelelweyo. Ukuba uyayifuna njengetafile esecaleni, ke umntu uya kuyenza. Kuloo kona onayo engenanto, ngokuqinisekileyo iya kukunika ubuntu obuninzi kwaye lixesha lokubheja kwingcamango efana nale. Kanjalo ukuba sikhankanya amagumbi okulala kunye namagumbi okuhlala, amagumbi okuhlambela akanakushiyeka ngasemva. Kuba kuzo nathi sidinga uncedo olukhulu olufana nesitulo ekuhombiseni. Unokuyisebenzisa njengesihlalo okanye wongeze iinkcukacha ezongezelelweyo.
Khetha izitulo eziphezulu zekhitshi
Kwakusafuneka sikhankanye enye yeendawo ezisisiseko ekhayeni lethu. Ke ngoko, isitulo ekhitshini sinokuba ngumlinganiswa omkhulu. Kule meko, Siza kukhetha ezinye iindawo eziphakamileyo ezisebenza njengezitulo kwaye ezifikelela kumphakamo we-countertop okanye isiqithi esiphakathi, kwimeko yokuba nayo. Ngenxa yokuba ngale ndlela, sinokwenza iindibano zentsapho zibe mnandi ngakumbi kwaye zigqibelele. Ukusukela njengoko besigqabaza, azizukukuthatha kakhulu kwaye unokuhlala unaso eso sithuba sisondeleyo usidinga kakhulu. Ngaphandle kwamathandabuzo, isitulo sesinye sezinto zokuhombisa eziza kuqaqambisa yonke imihlobiso yakho. Ukwazi konke oku, ngaba uya kwenza ngaphandle kwabo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Izixhobo zasekhaya » Izizathu zokubandakanya isitulo kumhombiso wekhaya lakho
'UEmily eParis' ubuya kunye nesizini yakhe yesibini kwiNetflix